IVilla Efata, ichibi labucala eGadog, eMega Mendung - I-Airbnb
IVilla Efata, ichibi labucala eGadog, eMega Mendung
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguYessika
Gxininisa kule villa ithokomeleyo nephangaleleyo, ijikelezwe yigadi eluhlaza nethandekayo enomthunzi. Ibekwe ngokufanelekileyo kumgama nje omfutshane ukusuka eCiawi Phuma kwiRhafu. Ngomhlaba opheleleyo we- +/- 1400 sqm kwiqela eligayiweyo, uya kuthotywa uhlaza kunye nomoya ococekileyo ukuze uhlale uphumle. Nokuba sizipholele ngaphakathi endlwini, sihambahamba egadini nakwindawo eselumelwaneni, okanye sitshiza kwidama lethu labucala, uya kufumana le ndawo ifanelekile kwiholide yosapho okanye indibano yamashishini amancinci.
A. indlu enemigangatho emi-2:
Ifumaneka kumgangatho wokuqala kuphela:
1. Igumbi lokuhlala: I-TV (i-cable TV), isofa, igumbi lokuhlambela eli-1 (indlu yangasese kunye neshawari).
2. Indawo yokutyela: itafile yokutyela enezitulo ezi-6.
3. Ikhitshi: itafile yokutyela engqukuva enezitulo ezi-4, ifriji, imicrowave, isitovu serayisi, iimbiza, iipani, ipleyiti, izinto zokupheka, iimfuno zokupheka njl.njl. Isitovu segesi siyafumaneka kwikhitshi elingaphandle elikufutshane.
4. Igumbi lokulala 1: ibhedi enkulu, ibhedi enesayizi enye enkulu, iwadilophu, kunye nedesika. Zikhona iilinen zokulala. Umosi wenwele. Igumbi lokuhlambela (indlu yangasese kunye neshawari).
5. Igumbi lokulala 2: ibhedi enkulu, i-wardrobe kunye nedesika. Zikhona iilinen zokulala. Igumbi lokuhlambela (indlu yangasese kunye neshawari).
6. Igumbi lokulala 3: iibhedi ezimbini zesayizi enye, i-wardrobe kunye nedesika. Zikhona iilinen zokulala. Igumbi lokuhlambela lingaphandle kwegumbi lokulala.
7. Onke amagumbi okuhlambela abonelelwa ngeshampu, isepha, iphepha langasese kunye neetawuli. Asizalisi kwakhona ngexesha lokuhlala kwakho.
8. Ipatiyo ngasemva kwendlu: itafile engqukuva enezitulo ezi-3, ejongene nedama lokuqubha. Ngaphaya kwechibi kukho enye ipatio enetafile engqukuva nezitulo ezi-3.
9. Idama lokuqubha elingasemva kwendlu.
10. Indawo yokuhlambela ecaleni kwedama: ishawa kunye nendlu yangasese. Umatshini wokuhlamba, ibhodi yoku-ayina kunye nentsimbi.
11. Indawo yokupaka: i-carport egqunyiweyo (iimoto ezi-2), i-carport engagqunywanga (iimoto ezi-2), indawo yokupaka ikwafumaneka phambi kwesango.
B. Bbq House
-Indawo yeBbq, nceda uze nezixhobo zakho.
- Itafile engqukuva nezitulo.
- Igumbi elincinci kunye nendlu yangasese.
C. Ibala lokudlala: ijingi, ibona-saw, kunye nebar yeenkawu.
D. Igadi: ichibi lentlanzi, i-gazebo, umkhondo wokubaleka, indawo eninzi evulekileyo enemithi.
I-villa ibekwe kwindawo ebumelwaneni ethe cwaka kwaye ezolileyo, ekude kwindlela ephithizelayo nexineneyo. Ungakonwabela ukuhamba ujikeleze ubumelwane apho kukho iigadi ezininzi kunye neepadi okanye amasimi emifuno.
Umbuki zindwendwe ngu- Yessika
Uza kuba nemfihlo yakho, kodwa zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba ufuna nantoni na okanye unemibuzo. Ndingaqhagamshelwa ngetekisi, i-imeyile, okanye ifowuni (isicatshulwa okanye i-imeyile ekhethwayo).
Kukho usapho lwabagcini bevilla abahlala kwindlu eyahlukileyo ngaphakathi kwendawo enye. Ungaqhagamshelana nabo ukuba ufuna uncedo okanye unemibuzo, ngokuxhomekeke ekufumanekeni kwabo.
Uza kuba nemfihlo yakho, kodwa zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba ufuna nantoni na okanye unemibuzo. Ndingaqhagamshelwa ngetekisi, i-imeyile, okanye ifowuni (isicatshulwa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Megamendung